ရိုက်ကွင်းပေါ်ကဝေါဟာရများ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on March 5, 2013 at 17:36 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူတိုင်းနီးပါး ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုကြည့်ရတာကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိတ်သားပြင်မှန်သားပြင် ပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်က ဘ၀တွေနဲ့တော့ ရင်းနှီးသူတွေရှားလှပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ရှင် လောကသားတွေရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာပြောဆိုသုံးနှုန်းမယ့်စကားတွေ ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ အောက်မှာ ရိုက်ကွင်းပေါ်ကဝေါဟာရတစ်ချို့ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Props - the objects used inaﬁlm or video.
ရုပ်ရှင်ဖြစ်စေ၊ ပြဇာတ်ဖြစ်စေ ဇတ်ဝင်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ ဆက်တင်ပစ္စည်း stage accessories တွေဖြစ်ပါတယ်။
Script — the text foraﬁlm, video orTV programme. ဇာတ်ညွှန်း
Footage — "footage" of an event isaﬁlm of it (or part of it). မတီးဖြတ်ရသေးသောရုပ်ရှင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုဟာ footage လို့ခေါ်တဲ့ ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားပြီးသား ရုပ်ရှင်အကြမ်းကိုစုပေါင်းတီးဖြတ်၊ အထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးမှ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ ရုံတင်ပြသရန်အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။
A shoot — if there isa"shoot’ part of the video / movie is ﬁlmed. မြန်မာတွေပြောတဲ့ရှုတင်ဆိုတာပါ။
Shooting schedule —atimetable for making the video / ﬁlm, etc
ဘာပြီးဘာရိုက်မယ်။ ဘယ်နေ့မှာဘာရိုက်မယ်ဆိုတာကိုရေးဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်။ လုပ်ငန်းစဉ်
Post on — if you "post"avideo onawebsite, you put it there. ဒါကတော့နောက်မှခေတ်စားလာတဲ့စကားဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်။ website ပေါ်တင်တယ်ပေါ့။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကြီးတစ်ခုတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ထားလေ့ရှိတယ်။ ကြော်ညာဖို့အဓိကပေါ့။
Embedavideo — to insertavideo into an application.
ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုမှာ ဗွီဒီယိုဇတ်လမ်းကိုမြှုပ်ပြီးထည့်ပေးထားတာပါ။ ဥပမာ powerpoint presentation slide တစ်ခုမှာဗွီဒီယိုထည့်ပြီးရှင်းလင်းတာမျိုး။
Soundtrack - the sound, music or speech onaﬁlm /video. ဇာတ်ဝင်တေး။ တစ်ခါတစ်လေ OST(original soundtrack) လို့အတိုခေါက်ခေါ်ကြတယ်။
Opening shot /establishing shot - the ﬁrst thing you see when the ﬁlm /video starts.
On-screen text — the words that appear on the screen. ပိတ်ကား၊ တီဗွီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်နေသည့်စာသား။ အထူးသဖြင့် သတင်းကြေညာသူဟာရှေ့မှာပေါ်နေတဲ့ on-screen text ကိုကြည့်ပြီးသတင်းကြေညာတာမျိုး။
Zoom lens—alens onacamera that makes images appear bigger when you zoom in.
Camera angle — there are many types of camera angles, includingabird's eye view (from above, looking down), an eyelevel shot (positioned at the height of the subject's eyes) and point of view shots (where the camera becomes the "eyes" of one particular character).
ကင်မရာရှုထောင့်။ ရှုထောင့်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။abird's eye view ဆိုတဲ့အပေါ်စီးကမြင်ရတဲ့ အမြင်၊ an eyelevel shot ဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့တစ်တန်းထဲအမြင်၊ POV (point of view shots) ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်တစ်ခုရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တဲ့အမြင် ဆိုတာတွေရှိပါတယ်။
Camera shot — there are many types of camera shots, includingalong shot, andaclose-up (focusing on the subject's face orapart of it, for example).
ကင်မရာရိုက်ချက်။ ကင်မရာရိုက်ချက်အမျိုးမျိုးကတော့along shot အဝေးရိုက်ချက်၊ close-up ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်စေ၊ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေ အနီးကပ်ဆွဲရိုက်ချက် စတာတွေပါ။
Scene — A complete unit of film narration. A series of shots (orasingle shot) that takes place inasingle location and that deals withasingle action. Sometimes used interchangeably with sequence.
ပြကွင်းပြကွက် တစ်ရပ်။ ဇာတ်လမ်း၏ အခန်း တစ်ခန်းမှ ကဏ္ဍတစ်ရပ်။
ဒါကို မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ တစ်ကတ် လို့ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထား တဲ့မြန်မာလိုရှင်းလင်းချက်များဟာ အရပ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့သာနားလည်သလိုပြန်ဆို ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေသုံးနှုန်းပုံနဲ့ကွဲပြားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
I think we'll have to shoot it again. ဒို့ထပ်ရိုက်ရမယ်နဲ့တူထင်တယ်။
It'sabit dark in here. ဒီမှာနည်းနည်းမှောင်နေတယ်။
I think we need some more light. အလင်းရောင်နည်းနည်းပိုလိုတယ်။
Try focusing on the background. နောက်ခံကိုအာရုံစိုက်ရိုက်။
ဒီ dialog လေးနဲ့တွဲပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါ။
PHIL AND MARION ARE MAKING A HORROR FILM. IN THIS DIALOGUE, THEY'RE PLANNING THE FILM SHOOT
Marion: I've got it! For the opening scene, let’s do an aerial shot. It’ll be really impressive.
Phil: But we can't affordahelicopter! We can't even affordatripod. We have to shoot everything hand—held.
Marion: OK. But let's use lots of oblique angles-they're really scary. Have you got the 3D camera?
Phil: Erm, not quite.The 3D camera was really expensive. lsacamcorder ok?
Marion: Oh, I guess so... How about the props?
Phil: I still have to get the fake blood, the vampire teeth and the carving knife.
Marion: OK. Right! The knife has to look really sharp. We'll be shooting it in close-up.
Phil: We can only affordaplastic one.
Marion: Plastic! Phil: Oh, and I've put together the shooting schedule. It's going to
be really tight.
Marion: Well, I needalot of footage. l hope we'll have time to get it all. How many days is the shoot?
Marion: One? I can't make my ﬁlm in one day! My script is 200 pages long!
လူတိုငျးနီးပါး ရုပျရှငျဗှီဒီယိုကွညျ့ရတာကွိုကျကွမယျထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပိတျသားပွငျမှနျသားပွငျ ပျေါမှာတှရေ့တဲ့သူတို့ရဲ့နောကျကှယျက ဘ၀တှနေဲ့တော့ ရငျးနှီးသူတှရှေားလှပါလိမျ့မယျ။ ရုပျရှငျ လောကသားတှရေဲ့ ရိုကျကှငျးပျေါမှာပွောဆိုသုံးနှုနျးမယျ့စကားတှေ ဘယျလိုရှိမလဲဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားစရာပါ။ အောကျမှာ ရိုကျကှငျးပျေါကဝေါဟာရတဈခြို့ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
ရုပျရှငျဖွဈစေ၊ ပွဇာတျဖွဈစေ ဇတျဝငျခနျးတှမှောအသုံးပွုတဲ့ ဆကျတငျပစ်စညျး stage accessories တှဖွေဈပါတယျ။
Script — the text foraﬁlm, video orTV programme. ဇာတျညှနျး
Footage — "footage" of an event isaﬁlm of it (or part of it). မတီးဖွတျရသေးသောရုပျရှငျအစိတျအပိုငျးတဈခု။ ရုပျရှငျတဈခုဟာ footage လို့ချေါတဲ့ ကငျမရာဖွငျ့ရိုကျထားပွီးသား ရုပျရှငျအကွမျးကိုစုပေါငျးတီးဖွတျ၊ အထူးပွုလုပျခကျြတှနေဲ့ပေါငျးစပျပွီးမှ နောကျဆုံးထှကျလာတဲ့ ရုံတငျပွသရနျအသငျ့ဖွဈနတေဲ့ဇာတျကားတဈခုဖွဈလာတာပါ။
A shoot — if there isa"shoot’ part of the video / movie is ﬁlmed. မွနျမာတှပွေောတဲ့ရှုတငျဆိုတာပါ။
ဘာပွီးဘာရိုကျမယျ။ ဘယျနမှေ့ာဘာရိုကျမယျဆိုတာကိုရေးဆှဲထားတဲ့ အစီအစဉျ။ လုပျငနျးစဉျ
Post on — if you "post"avideo onawebsite, you put it there. ဒါကတော့နောကျမှခတျေစားလာတဲ့စကားဖွဈမယျနဲ့တူပါတယျ။ website ပျေါတငျတယျပေါ့။ ရုပျရှငျဇာတျလမျးကွီးတဈခုတိုငျးမှာကိုယျပိုငျထားလရှေိ့တယျ။ ကွျောညာဖို့အဓိကပေါ့။
ဒါကတော့ ကှနျပြူတာပရိုဂရမျတဈခုမှာ ဗှီဒီယိုဇတျလမျးကိုမွှုပျပွီးထညျ့ပေးထားတာပါ။ ဥပမာ powerpoint presentation slide တဈခုမှာဗှီဒီယိုထညျ့ပွီးရှငျးလငျးတာမြိုး။
Soundtrack - the sound, music or speech onaﬁlm /video. ဇာတျဝငျတေး။ တဈခါတဈလေ OST(original soundtrack) လို့အတိုခေါကျချေါကွတယျ။
On-screen text — the words that appear on the screen. ပိတျကား၊ တီဗှီဖနျသားပွငျပျေါတှငျပျေါနသေညျ့စာသား။ အထူးသဖွငျ့ သတငျးကွညောသူဟာရှမှေ့ာပျေါနတေဲ့ on-screen text ကိုကွညျ့ပွီးသတငျးကွညောတာမြိုး။
ကငျမရာရှုထောငျ့။ ရှုထောငျ့တှအေမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။abird's eye view ဆိုတဲ့အပျေါစီးကမွငျရတဲ့ အမွငျ၊ an eyelevel shot ဆိုတဲ့မကျြလုံးနဲ့တဈတနျးထဲအမွငျ၊ POV (point of view shots) ဆိုတဲ့ဇာတျကောငျတဈခုရဲ့မကျြလုံးနဲ့ကွညျ့တဲ့အမွငျ ဆိုတာတှရှေိပါတယျ။
ကငျမရာရိုကျခကျြ။ ကငျမရာရိုကျခကျြအမြိုးမြိုးကတော့along shot အဝေးရိုကျခကျြ၊ close-up ဇာတျကောငျတဈကောငျရဲ့မကျြနှာဖွဈစေ၊ အစိတျအပိုငျးတဈခုကိုဖွဈစေ အနီးကပျဆှဲရိုကျခကျြ စတာတှပေါ။
ပွကှငျးပွကှကျ တဈရပျ။ ဇာတျလမျး၏ အခနျး တဈခနျးမှ ကဏ်ဏ္ဍတဈရပျ။
ဒါကို မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကမှာ တဈကတျ လို့ချေါတယျထငျပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးမှာဖျောပွထား တဲ့မွနျမာလိုရှငျးလငျးခကျြမြားဟာ အရပျသားတဈယောကျအနနေဲ့သာနားလညျသလိုပွနျဆို ပေးထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ မွနျမာ့ရုပျရှငျလောကသားတှသေုံးနှုနျးပုံနဲ့ကှဲပွားမှုရှိနိုငျပါတယျ။
I think we'll have to shoot it again. ဒို့ထပျရိုကျရမယျနဲ့တူထငျတယျ။
It'sabit dark in here. ဒီမှာနညျးနညျးမှောငျနတေယျ။
I think we need some more light. အလငျးရောငျနညျးနညျးပိုလိုတယျ။
Try focusing on the background. နောကျခံကိုအာရုံစိုကျရိုကျ။
ဒီ dialog လေးနဲ့တှဲပွီးလလေ့ာကွညျ့ကွပါ။
Permalink Reply by Thet Han Win on March 7, 2013 at 10:35
Thank you so much for your post. It's useful for me.
Permalink Reply by Jet Jet on March 7, 2013 at 11:46
ဘောလုံးပွဲနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စကားလုံးတွေလည်း တင်ပေးပါအုံး။
Permalink Reply by Ratan Biswas on March 7, 2013 at 12:30
Permalink Reply by Aung Soe on March 7, 2013 at 21:49
I like your post.We have seen many films but we didn't knowalot of terms.
Permalink Reply by Ye Htet Naing on March 7, 2013 at 22:18
Permalink Reply by dr.kyaw soe oo on March 8, 2013 at 11:01
Permalink Reply by thu ra soe on March 8, 2013 at 19:31
Permalink Reply by shwinpyone on June 8, 2015 at 13:26